Imaam Maalik - Wikipedia
waa Maalik ibn Anas ibn Maalik ibn Camar Al-Asbaxi
Qisadii Dex martay Ninkii lacagta ka dhuntay iyo Imaamu Maalik
Habeen habeenada ka mid ah ayaa Imaamu Abaa Xaniifa waxaa u yimid Nin waxa uuna ku yiri Yaa Abaa Xaniinfa Mudo hada laga joogo Wakhti badana ayaan meel waxaan ku Qarsaday lacag kadibna waxaan hilmaamay Halkii aan ku qarsaday, sidaas darteed waxaan rabaa in aad igu saacidid sidaan Lacagtiis ku heli lahaa?
Imaamkii oo aad ula yaaban Su'aasha la waydiiyay ayaa waxa uu ku yiri Ninka Fiqiga wax laga waydiiyo Arinta aad ii sheegayso ma aha Shaqdiisa si uu xal kuugu keeno! Kadib wax yar ayuu fakaray Imaamkii waxa uuna ku yiri Tag oo Salaatu'layl Tuko ilaa Salaada Subax laga Adaamayo, insha allaah waad heli doontaa lacagtaada halka aad ku qarsatay.
Ninkii waa uu tagay Gurigiisa waxa uuna Bilaabay in uu Tukado, wax yar kadiba si lama filaan ah asaga oo Salaada ku jira ayaa waxa uu xasuustay halka uu ku Qarsaday lacagtiisa, kadibna asaga oo dag dagsan ayuu Meeshii ku tagay kalana soo baxay lacagtii.
Subaxdii ayuu Imaamkii u yimi una sheegay in uu helay lacagtii, ugna Mahad celiyay, kadibna waxa uu Imaamkii waydiiyay sidee baad ku ogaatay ayuu yiri in aan xasuusan doono lacagata halka aan ku qarsaday? Imaamkii waxa uu yiri waxaan ogaa haddii aad Salaad u istaagtid in Shaydaan uusan marna ku dhaafi doonin Salaadana uu kaaga Mashquulin doono in uu ku soo xasuusiyo halka aad ku qarsatay lacagtaadii.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Imaam_Maalik&oldid=143171"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 13:24.